Ihowuliseyili Cone isityumzi banxibe inxenye udongwe udonga eqengqelekayo isityumzi yoMvelisi kunye noMthengisi | Shengde
Cone isityumzi banxibe isahlulo kaludaka udonga eqengqelekayo isigaxa isityumzi
Cone isityumzi isetyenziswa ngokubanzi yokunyibilikisa isinyithi, ulwakhiwo, imigodi kunye namanye amashishini. Ingasetyenziswa njengokutyunyuzwa kwesekondari okanye ukutyunyuzwa kwamabanga aphezulu kunye neekota. Amalungu ahlukeneyo asesichengeni se-hydraulic cone crusher, i-cone crusher edibeneyo kunye ne-spring cone crusher zibizwa ngokuba zii-cone crusher accessories. Ubume isityumzi ityhubhu ubukhulu becala iqulunqwe isakhelo, shaft tye, ezihamba cone, ivili eseleyo, emkhonweni ome njengeqanda, udonga ngodaka ephezulu (ezinzileyo cone nqanawa), udonga asezantsi otyumkileyo (ihamba cone nqanawa), nokuhlangana hydraulic, inkqubo ukuthambisa ajikeleze, inkqubo kubunzulu baphantsi , inkqubo yolawulo, njl
Udonga lodaka lolona luxhaphakileyo lunxibayo.
Imanganisi 13 (Mn13) udonga oluqengqelekayo lodonga lokutyhoboza udonga
Mn13 unamandla aphezulu eqine, iplastiki, ubunzima kunye nemagnetism. Nokuba iinxalenye zinxitywe zabhitya kakhulu, zisenokuthwala umthwalo omkhulu ngaphandle kokuqhekeka. Isetyenziselwa ukulahla iindawo ezahlukeneyo zokungqubana nefuthe.
Manganese 13 chromium 2 (mn13cr2) udonga oluqengqelekayo lodonga lokutyhoboza udonga
Izinto zeMn13cr2 zamkelwe, oko kukuthi, i-Cr element yongezwa ngelixa kuncitshiswa umxholo we-C kunye noMn kwisinyithi semveli ephezulu yemanganese, esenza isiphene sokuqina okwaneleyo kwentsimbi ephezulu yemanganese kwaye inyusa ixesha lobomi benkonzo iindawo ezinxibayo.
Imanganisi 18 (mn18) udonga oluqengqelekayo lodonga lodonga
Isamente yokunxiba enganyangekiyo yentsimbi ye-manganese yinqanaba eli-mn18 lodonga oluphezulu lwe-manganese yesinyithi esine-manganese ephezulu kunye nomxholo wekhabhoni; Ubume besinyithi obenziwe ngesinyithi yi-austenite kunye ne-carbide. Emva konyango lokuqinisa amanzi lwe-1050, uninzi lwe-carbide luyanyibilika kwi-austenite.
Ukuze kuphuculwe ukwenziwa kodonga oluqengqelekayo lodaka, izinto ezininzi ezenziweyo kunye nencindi eyenziwe ngophando malunga nokulungiswa komxholo wekhabhoni kunye nemanganese kunye nokomeleza unyango, ukomeleza udonga olutsha kunye nodonga olwaphukileyo olwenziwe yinkampani zingama-20. % ngaphezulu kuneemveliso ezifanayo. Zisetyenzisiwe kwimveliso yokusebenza kwaye yamkelwe sisininzi sabasebenzisi.
Egqithileyo Bazahluli abavelisi intloko yesinyithi manganese eliphezulu
Okulandelayo: Isando ecoliweyo isando
Crusher aluxhaswanga Plate
Amacwecwe omhlathi omhlathi
Imihlathi isityumzi Wear
Manganese isityumzi Wear Izahlulo
Imigodi isityumzi Wear Izahlulo
Iindidi Of emihlathini isityumzi
Isando ecoliweyo isando
Impembelelo isityumzi izincedisi
Bazahluzi abenzi eliphezulu manganese intsimbi hamm ...
Umhlathi isityumzi izincedisi kwemigodi oomatshini kunye eq ...